निकोला टेस्ला - विकिपिडिया
अमेरिकाली आविष्कारक, भौतिक वैज्ञानिक, यांत्रिक अभियन्ता, र विद्युत अभियन्ता
निकोला टेस्ला (अङ्ग्रेजी: Nikola Tesla; सर्बियाली सिरिलिक: Никола Тесла, १० जुलाई १८५६ - ७ जनवरी १९४३) [[अस्ट्रिया|सर्बियाली]] अमेरिकाली आविष्कारक, भौतिक वैज्ञानिक, यान्त्रिक अभियन्ता, र विद्युत अभियन्ता थिए ।
निकोला टेस्ला ३४ वर्षको उमेरमा, सन् १८९०
Nikola Tesla, अन्दाजी 1896
(१८५६-०७-१०)१० जुलाई १८५६
Smiljan, अस्ट्रिया (modern-day क्रोएसिया)
७ जनवरी १९४३(१९४३-०१-०७) (८६ वर्ष)
न्युयोर्क, New York, संयुक्त राज्य अमेरिका
Nikola Tesla Museum, Belgrade, सर्बिया
American ढाँचा:No wrap
ढाँचा:Infobox engineering career
सर्बियाली वैज्ञानिक ‘निकोला टेस्ला’को विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विशाल ज्ञानको कारण नै उनी सूचीको पहिलो स्थानमा परेका हुन्। सन् १८५६ मा जन्मेका उनले ८ वटा भाषाहरू बोल्न सक्थे। एकचोटि पढेकै भरमा उनले पुरै पुस्तक कन्ठ पार्न सक्थे। एकचोटि देखेकै भरमा कुनै पनि मेसिनको निर्माण गर्न सक्थे, त्यो पनि केहि नलेखी! टेस्ला आफैले थुप्रै आविष्कारहरू गरे तर बाहिर प्रस्तुत गरेनन्। एडिसनले चार्ज भनेको के भनेर थाहा पाउनुभन्दा पहिल्यै टेस्लाले एसी विद्युत अल्टरनेटिङ् करेन्टको आविष्कार गरेका थिए। रेडियोको आविष्कारबाट नोबेल पुरस्कार पाएका मार्कोनीले पनि टेस्लाकै जुक्ति प्रयोग गरेका थिए। रोयन्टजेनले बनाएको एक्स-रे, वाटसन-वाटले बनाएको रेडार सबै टेस्लाकै आविष्कार थियो। यस्तो कुनै पनि आविष्कार थिएन, जुन टेस्लाले गर्न सक्दैनथ्यो। नायग्रा झरनाको पहिलो जलबिध्युत आयोजना, ट्रान्जिस्टर, अन्तरीक्षको रेडियो तरङ्ग रेकर्डर सबै टेस्लाकै आविष्कार हो। रिमोट कन्ट्रोल, नियोन लाइटनिङ्, आधुनिक विद्युतीय मोटर, भू-कम्प मेसिन आदि टेस्लाका उत्कृष्ट आविष्कारहरू हुन्। तथापी, उनले आफ्नो अधिकांश आविष्कारहरू बाहिर प्रस्तुत नगर्ने भएकाले नै धेरैले उनको आविष्कार चोरेका थिए। उनको मृत्यु सन् १९४३ मा एउटा होटेलको कोठामा भएको थियो र २ दिनपछि मात्रै फेला पारिएको थियो।
२ अमेरिका प्रस्थान र एडिसन सँगको सहकार्य
३ एडिसनसँग सम्बनधविच्छेद
४ वार अफ करेन्ट (War of Current )
५ नायगरा विद्युत गृह
६ टेस्लाः रेडियोका आविस्कारक
७ कोलोराडोमा अनुसन्धान केन्द्र
८ स्वप्न स्तम्भ ( Tower of Dream)
९ राडारको आविस्कार
१० नोबेल पुरस्कार ?
११ युद्ध अन्त्य गर्ने हतियार
१४ टेस्लाका केही महत्त्वपूर्ण भनाइहरूः
१६ बाह्य कडी
निकोला टेस्लाको जन्म १८५६ जुलाई १० मा क्रोएसियाको स्मिलजान(हाल सर्विया)मा भएको थियो । उनको पिता मिलुटिन टेस्ला कट्टर क्रिस्चियन धर्मगुरु थिए । उनको आमाको नाम जुका म्यान्डिक हो । उनी आÏना बुवा आमाका चौथो सन्तान थिए । उनले प्रारम्भिक शिक्षा स्मिलजानकै एक प्राथमिक विद्यालयमा शुरु गरेका थिए । त्यहाँ उनले गणित र धर्मशाश्त्र पढे । १५६२ मा टेस्ला परिवार गोस्पिक भन्ने ठाउँमा बसाई स¥यो । त्यहाँ टेस्लाका पिता पादरी काम गर्दथे । त्यहीँ उनी एक जिम्नेजियम विद्यालय भर्ना भए र आÏनो प्राथमिक शिक्षा पुरा गरे । ‘हुने विरुवाको चिल्लो पात’ भनेझैं टेस्ला सानै उमेर देखि तीक्ष्ण बुद्धिका थिए । एक पटक स्कूलमा इन्टिग्रल क्याल्कुलशको एउटा समस्या हल गर्दा शिक्षकले ‘चोरेर गरेको’ आरोपसमेत लगाएका थिए ।
१८७३ मा टेस्ला केही समयका लागि गृहनगर स्मिलजान फर्किए । त्यहाँ उनलाई हैजाले आक्रान्त पा¥यो । नौ महिनासम्म उनी ओछ्यान परे । उनी बल्लतल्ल मृत्युको मुखबाट उम्कन सफल भए । बिरामीबाट तंग्रिएपछि १८७५ मा उनी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अस्ट्रिया गए । त्यहाँको ग्रेजस्थित पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटमा मेकानिकल र विद्युतीय इन्जिनियरिङको अध्ययन गरे । पारिवारिक समस्याका कारण उनले १८७८ मा पढाइ बीचमै छोड्नुप¥यो । १८७९ मा पिताको निधनपछि टेस्ला गोस्पिक फर्किए । त्यहाँ पहिले आफू पढेको विद्यालयमा केही समय पढाए । पछि १८८१ मा उनी हँगेरीको बुढापेस्ट गएर त्यहाँको केन्द्रीय टेलिफोन एक्सचेन्ज अफिसमा काम गर्न थाले । त्यहाँ काम गर्दै गर्दा उनको दिमागमा चुम्बकीय क्षेत्रको परिभ्रमण सम्वन्धी बिल्कुलै नयाँ आइडिया फु¥यो । त्यो आइडियालाई मूर्तरूप दिन उनले अमेरिका जाने निर्णय गरे ।
अमेरिका प्रस्थान र एडिसन सँगको सहकार्यसम्पादन
२८ वर्षको उमेरमा टेस्ला १८८४ मा न्युयोर्क आइपुगे । जहाँ उनको विश्वकै सबैभन्दा महान् वैज्ञानिक तथा आविस्कारक थोमस एल्वा एडिसनसँग काम गर्ने अभिलाषा थियो । अमेरिका आइपुग्दा उनको खल्तीमा जम्मा ४ सेन्ट पैसा थियो अनि थियो केही गणितीय हिसाव (Mathematical computation), उड्ने मेसिनको स्केच आइडिया र एडिसनको युरोपियन व्यापारिक साझेदार चाल्र्स ब्याचलरको सिफारिशपत्र । जब टेस्ला आफूले भेट्न र सँगै काम गर्न चाहेको ‘हिरो’ एडिसनको अफिसमा पुगे, उनी एकदमै उद्धेलित र रोमाञ्चित भैरहेका थिए । उनले एडिसनको हातमा चाल्र्स ब्याचलरको सिफरिस पत्र थमाए, जहाँ लेखिएको थियो–
“My dear Edison, I know two great men & you are one of them. The other is this young man.”
''(“प्रिय एडिसन महोदय, म दुई महान् मानिसहरूबारे जान्दछु र तपाइँ तिनीहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ । अर्को चाहिँ यो ठिटो हो ।”)
टेस्लाले आफुले गरेका इन्जिनियरिङ सम्वन्धी कामहरूबारे बताए र एसी विद्युत अल्टरनेटिङ करेन्ट मोटरबारेको आफ्नो अवधारणा पनि सुनाए ।
सर्वप्रथम विद्युतको प्रयोग सन् १८७० को दशकको अन्त्यतिर भएको थियो । त्यतिखेर एडिसनले फिलामेन्ट चिमको भर्खरै आविस्कार गरेका थिए । एडिसनको DC पावर स्टेशन म्यानहटनको पल स्ट्रिटमा थियो । न्युयोर्कका धनाढ्यहरू आ–आÏनो घरका बिजुली बाल्न प्रशस्त खर्च गर्न तयार थिए । तीनै धनाढ्यहरूमध्येका एक बैङ्कर जे.पी. मोर्गानले एडिसनको परियोजनामा भारी मात्रामा लगानी गरेका थिए । तर त्यतिबेला विद्युत प्रणाली अत्यन्त जोखिमयुक्त थियो । डी.सी. करेन्टमा भएका खराबीहरू हटाउन एडिसनले टेस्लालाई नियुक्त गरे । टेस्लाको दाबी अनुसार यदि उनले उक्त काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सके एडिसनले उनलाई ५० हजार अमेरिकी डलर दिने सम्झौता थियो । टेस्ला उक्त काम फत्ते गर्न रातदिन लागि परे । महिनौँसम्मको अथक परिश्रम र अनुसन्धानपश्चात् उनले आÏनो जिम्माको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे ।
काम सम्पन्न भइसकेपछि उनले एडिसनसमक्ष सम्झौताअनुसारको रकम दिन अनुरोध गरे, तर एडिसन यस कुरामा अनिच्छुक देखिए । उल्टो एडिसनले टेस्लालाई हाँसो–मजाकमा उडाउँदै जोकको एक पात्रको रूपमा चित्रित गरे । एडिसनले उक्त सम्झौता बमोजिमको रकम दिन अस्वीकार गरे । बरु टेस्लालाई उनको साप्ताहिक पारिश्रमिक १० डलरबाट बढाएर १८ डलर पु¥याइदिने प्रस्ताव राखे । एडिसनको यस किसिमको व्यवहारबाट टेस्लाले आफूलाई धोका र अपमान भएको महशुस गरे । उनले तत्कालै एडिसनलाई राजीनामा बुझाएर त्यहाँबाट काम छोडेर हिँडे ।
वार अफ करेन्ट (War of Current )सम्पादन
एडिसनसँग सम्बनधविच्छेदपछि १८८८ मा टेस्लाले एसी करेन्ट (एसी विद्युत) सिस्टम (AC Current System ) सम्वन्धी काम शुरु गरे । उनलाई त्यतिबेलाका प्रख्यात उद्योगपति जर्ज वेस्टिङहाउसले साथ दिएका थिए । उनले (AC Current System ) सम्वन्धी आफूले पत्ता लगाएका ४० आविस्कारको राइट (स्वामित्व अधिकार) वेस्टिङहाउसलाई बेचेका थिए । जसको पेटेन्ट मूल्यबापत उनले ६० हजार अमेरिकी डलर प्राप्त गरे जसमध्ये ५ हजार डलर नगदै र बाँकी रकमबाट वेस्टिङहाउस कर्पोरेसनको १५० कित्ता सेयर थियो । यस बाहेक उनले प्रति हर्सपावर विद्युत उत्पादनबापत साँढे दुई अमेरिकी डलर रोयल्टी पाउने भए ।
वेस्टिङहाउससँगको सम्झौताबाट प्राप्त रकमबाट उनले आÏनै प्रयोगशाला स्थापना गरे । AC करेन्टमा वेस्टिङहाउस कर्पोरेसनको यस्तो किर्तिमानी लगानीपछि अमेरिकाको औद्योगिक क्षेत्रमा टेस्लाको AC करेन्ट प्रयोग गर्ने कि एडिसनको DC करेन्ट प्रयोग गर्ने भन्नेबारेमा ठूलो हलचल मच्चियो । किनभने एडिसन अमेरिकाको विद्युतीय संयन्त्रमा आफ्नो DC करेन्ट बेच्न चाहन्थे तर अन्ततः टेस्ला– स्टिङहाउसले यो मामिलामा बाजी मारे । कारण प्राविधिकरूपमा DC करेन्ट भन्दा AC करेन्ट सिस्टम कम त्रुटिरहित, उत्कृष्ट र प्रयोगयोग्य थियो । टेस्लाले १८९१ मा घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गरिने ६० हर्जको AC करेन्ट सिस्टम सम्वन्धी पेटेन्ट दर्ता गराए । त्यही वर्ष उनले टेस्ला क्वाइल (Tesla Coil) आविस्कार गरे । त्यही टेस्ला क्वाइल रेडियो तथा टेलिभिजन सेटमा आजसम्म प्रयोग गरिँदै आएको छ ।
सन् १८९३ को मे महिनामा अमेरिकाको शिकागो शहरमा शिकागो विश्व मेला (Chicago World Fair) आयोजना हुँदै थियो । कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएको ४ सय औँ वर्षगाँठको अवसरमा आयोजित उक्त मेलालाई कोलम्बियन महोत्सव (Columbian Exposition) को नाम दिइएको थियो । विद्युतीय प्रकाश प्रयोग गरी आयोजना गर्न लागिएको यो विश्वकै पहिलो प्रदर्शनी थियो । उक्त मेलामा विद्युतीय प्रकाशले झलमल्ल बनाउने जिम्मा टेस्ला–वेस्टिङहउस कर्पोरेसनले प्राप्त ग¥यो । यस प्रतिस्पर्धामा पनि एडिसनको जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी पछारिन पुग्यो । जसको पछाडी कारण थियो –DC करेन्ट सिस्टम सञ्चालन गर्न लाग्ने लागत AC करेन्टको भन्दा झण्डै दोब्बर थियो ।
१८९३ मे १ को साँझ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रोभर क्लेभल्याण्डले उद्घाटनमा जब स्वीच अन गरे, उक्त समारोह स्थल हजारौं विद्युतीय चिमको प्रकाशले झलमल्ल भयो । उक्त समारोहस्थल ‘प्रकाशको शहर’ जस्तै भयो । यसको पछाडी टेस्ला–वेस्टिङहाउसको अथक मेहनत र लगानी जिम्मेवार थियो ।
टेस्लाले यही प्रदर्शनीमा AC करेन्ट सिस्टमको बारेमा उक्त मेलामा सहभागी साँढे २ करोड मानिसलाई जानकारी गराउन सफल भए । यही प्रदर्शनीपश्चात् AC करेन्ट सिस्टम विद्युतीय क्षेत्रमा मानक ऊर्जा प्रणालीको रूपमा स्थापित भयो, जुन आजपर्यन्त स्थापित छ ।
नायगरा विद्युत गृहसम्पादन
टेस्ला बाल्यकालदेखि नै प्रकृतिबाट ऊर्जा उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चिन्तन गर्दथे । उनको कल्पना १८९५ मा साकार हुन पुग्यो । जब वेस्टिङहाउसले विश्वप्रसिद्ध नायाग्रा झरनामा विद्युतगृह बनाउने सभ्झौता गरे । नायगरा झरनामा ‘पावरहाउस’ निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नायगरा झरना आयोग (Niagara Falls Commission) बनायो । उक्त आयोगका प्रमुख विश्वविख्यात भौतिकशास्त्री लर्ड केल्भिन थिए । शिकागो महोत्सवमा आउनु अघिसम्म केल्भिन पनि DC करेन्टकै पक्षपाती थिए । तर पछि केल्भिन आफैले वेस्टिङहाउसलाई AC करेन्ट सिस्टम प्रयोग गर्न अनुरोध गरे । टेस्लाले १८९५ मा विश्वकै पहिलो जलविद्युत गृहको सफलतापूर्वक डिजाइन सम्पन्न गरे यो DC करेन्ट माथि AC करेन्ट सिस्टमको जितको अर्को सशक्त पाइला थियो ।
नायगरा प्रोजेक्ट सफतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि टेस्ला न्युयोर्कस्थित आफ्नै प्रयोगशाला South Fifth Avenue फर्किए । १८९६ मा उनले एक्स–रे ट्युबको डिजाइन र निर्माण गरे । त्यस बारेमा ‘इलेक्ट्रिकल रिभ्यु’ पत्रिकाले लेख छापेको थियो । यो कुरा त्यतिबेला सार्वजनिक भयो, जतिबेला रोएन्टजनले पनि भर्खरै आफ्नो एक्स–रे आविस्कारको घोषणा गरेका थिए । तर टेस्लाले एक्स–रेको आविस्कार आफूले पहिले गरेको भनी दाबी गरेनन् । रोएन्टजनले पनि टेस्लाको स्तरीय एक्स–रे इमेजको प्रशंसा गर्दै बधाई दिए ।
टेस्लाः रेडियोका आविस्कारकसम्पादन
रेडियोको वास्तविक आविस्कारक टेस्ला नै हुन् तर आजका दिनसम्म रेडियोको आविस्कारक मार्कोनी भनेर पढिँदै आएको छ । के हो त रेडियो आविस्कारको वास्तविकता ?
टेस्लाले १८९६ मै रेडियोको आधारभूत प्रणालीसम्वन्धी पेटेन्ट राइट (प्रतिलिपि अधिकार) दर्ता गराइसकेका थिए । जसमा उनले रेडियो ट्रान्समिटरको सबै मूलभूत तत्वहरू व्याख्या गर्दै रेखात्मक चित्र (Schematic Diagrams) प्रकाशित गरेका थिए । त्यही वर्ष उनले रेडियो तरङ्ग रिसिभ गर्ने उपकरण बनाए । उक्त उपकरण परीक्षण गर्ने क्रममा उनले आफ्नो प्रयोगशाला South 5th Avenue बाट म्यानहटनसम्म रेडियो सङ्केत प्रसारण गर्ने सफलता समेत प्राप्त गरे । उनको यही रेडियो उपकरणबाट नै आधुनिक रेडियोको आविस्कार भएको हो । त्यही समयमा इटालीका वैज्ञानिक मार्कोनी इङ्गल्याण्डमा अनुसन्धान गरिरहेका थिए । उनले १८९६ मा वायरलेस टेलिग्राफीको पहिलो पेटेन्ट दर्ता गरेका थिए । तर त्यो प्राविधिक रूपमा अत्यन्त कमजोर थियो । मार्कोनीको रेडियो सङ्केत थोरै (केही मिटर) दुरी मात्र पार गर्न सक्दथ्यो । पछि १९०१ मा मार्कोनीले टेस्ला ओसिलेटर (Tesla Oscillator) प्रयोग गरी रेडियो संकेतलाई English Channel पार गराउन सफल भए ।
टेस्लाले १८९६ मै रेडियो एप्लिकेसनहरू सम्वन्धी पेटेन्ट दर्ता गराएका थिए । जबकी मार्कोनीले १९०० नोभेम्बरमा मात्र आफ्नो पहिलो एप्लिकेसन सम्वन्धी पेटेन्ट अमेरिकामा दर्ता गराएका थिए । यो पेटेन्टको विषयलाई लिएर लिएर १९०३ सम्म चर्को विवाद भयो । १९०३ मा अमेरिकाको पेटेन्ट अफिसले यसबारेमा निर्णय गर्दै मार्कोनीले दर्ता गरेको एप्लिकेसन पेटेन्ट राइट दिनयोग्य नभएको जनाएको थियो किनकी त्यही प्रकृतिको एप्लिकेसन आविस्कारको पेटेन्टहरू पेटेन्ट नं. ६४५,५७६ र ६४९,६२१ टेस्लाले पहिल्यै दर्ता गराईसकेका थिए ।
यसै सन्दर्भमा टेस्लासँगै काम गर्ने इन्जिनियर ओटिस पोण्डले टेस्लालाई सजग गराउँदै मार्कोनीले उनको आविस्कारमाथि दाबी गरेकोबारे जानकारी गराएका थिए । तर यसबारेमा टेस्लाको प्रतिक्रिया यस्तो थियो – ‘मार्कोनी एक असल विद्वान हुन् उनलाई काम गर्न दिऊँ, उनले मेरा १७ वटा पेटेन्टहरू प्रयोग गरिरहेका छन् ।’
तर अमेरिकी पेटेन्ट अफिसले १ वर्ष अघिको आफ्नै निर्णय उल्टाउँदै १९०४ मा रेडियो आविस्कारको पेटेन्ट राइट एक्कासी मार्कोनीलाई प्रदान ग¥यो । रेडियोको आविस्कार गरेको भन्दै १९०९ को भौतिक शास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार समेत मार्कोनीलाई दिइयो । पेटेन्ट अफिसको यस्तो कदमप्रति टेस्ला निकै आक्रोशित भए । उनले मार्कोनीको कम्पनी विरुद्ध अदालतमा क्षतिपूर्तिको मुद्दा दायर गरे र उक्त मुद्दा १९४३ मा मात्र फैसला भयो । त्यति बेलासम्म टेस्लाको मृत्यु भैसकेको थियो । मुद्दाको फैसला गर्दै अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले रेडियो आविस्कारको वास्तविक हकदार टेस्ला नै भएको फैसला ग¥यो र उक्त पेटेन्ट अधिकार टेस्लाकै नाममा हुने फैसला ग¥यो । मृत्युपश्चात् नै भएपनि उनले न्याय पाए र उक्त तथ्य स्थापित भयो । तर आजसम्म पनि हामीहरू रेडियोका आविस्कारक मार्कोनी हुन् भनी भ्रम पढिरहेका छौ तर वास्तविक आविस्कारक भने उनै टेस्ला हुन् ।
रेडियो आविस्कार सम्वन्धी पहिलो अवधारणा उनले सन् १८९३ मा फिलाडेल्फियाको फ्रांकलिन इन्स्टिच्युटमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले विकास गरेका ४ वटा सर्किटहरू आज पनि हरेक रेडियो र टिभीहरूमा प्रयोग भइरहेका छन् ।
कोलोराडोमा अनुसन्धान केन्द्रसम्पादन
सन् १८९९ मा टेस्लाले कोलोराडोमा आफ्नो अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरे । त्यहाँ उनले हाई भोल्टेज (High Voltage), हाई फ्रिक्वेन्सी ( High Frequency) युक्त विद्युत र अरू थुप विषयहरूमा अनुसन्धान गरे । आफूले आविस्कार गरेको टेस्ला क्वाइल प्रयोग गरेर ३० फिट लामो / अग्लो विद्युतीय झिल्काहरू उत्पन्न गराउन सफल भए । यही प्रयोगशालाबाट उनले ताररहित तरङ्गहरू (Wireless waves )प्रसारण सम्वन्धी प्रविधि आविस्कार गरी ऊर्जा (Energy) लाई सयौं माइलसम्म प्रसारण गराउन सफल भए । १८९९–१९०० को बीचमा उनले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टेरेस्टेरियल स्टेशनरी वेभ (Terrestrial stationary waves ) को आविस्कार गरे । यो आविस्कारबाट उनले पृथ्वीलाई पनि विद्युतको सुचालकको रूपमा उपयोग गर्न सकिने तथ्य प्रकाशमा ल्याए । यही सिद्धान्तमा आधारित भएर करिब २५ माइल (४० कि.मी) टाढा बिनातार २ सय वटा विद्युतीय बल्वहरू बालेर देखाइदिए । त्यहीं उनले १ सय ३० फिट अग्लो विद्युतीय झिल्का (Lightning bolt) उत्पन्न गराएर देखाए । जुन आजसम्मकै सबैभन्दा अग्लो मानवनिर्मित विद्युतीय भिल्कोको किर्तिमान हो ।
स्वप्न स्तम्भ ( Tower of Dream)सम्पादन
सन् १९०० मा टेस्लाले बैङ्कर जे.पी. मोर्गानसँगको आर्थिक सहकार्यमा बायरलेस ब्रोडकास्टिङ सिस्टम टावर बनाउन शुरु गरे । न्युयोर्क नजिकै लङ आइल्याण्डमा १९०१– १९०५ सम्म लगाएर वार्डेनक्लाइफ (Wardenclyffe ) प्रयोगशाला निर्माण गरे । यो ऐतिहासिक टावरको उचाई १ सय ८७ फिट थियो, जसलाई ६८ फिटको तामाको ढकनी (Dome) ले ढाकिएको थियो । यस टावरभित्र रहेको म्याग्निफाइङ ट्रान्समिटरले अन्ततः पृथ्वीलाई एउटा विशाल डाइनामोको रूपमा परिणत गर्ने थियो र जसले यसबाट उत्पादित विद्युतलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँमा असीमित मात्रामा प्रवाह गर्ने गरी उक्त टावर डिजाइन गरिएको थियो ।
टेस्लाको वायरलेस इलेक्ट्रिसिटीको अवधारणामा अन्तरमहादेशीय सहज विद्युत प्रसारण, उद्योधन्दा सञ्चालन, यातायत, सुचनाको तत्काल विश्वव्यापी सम्प्रेषण आदि थिए । उनका अनुसार यस्तो वायरलेस इनर्जीलाई अन्य ग्रहसम्म प्रसारण/ प्रवाह गराउन सकिन्छ ।
१९०३ तिर जब वार्डेन क्लाइफ टावरको निर्माण कार्य अन्तिमतिर पुग्दै थियो, यसका लगानीकर्ता मोर्गानले टेस्लासँग प्रश्न गरे– ‘मैले मिटर कहा राख्ने ?’ टेस्लासँग यसको कुनै जवाफ थिएन, किनकी उनले त निःशुल्क ताररहित विद्युत (Free wireless Energy ) को बारेमा अनुसन्धान गरिरहेका थिए । टेस्ला र मोर्गानका बीचमा यो विषयमा कुरा मिलेन । अन्य लगानीकर्ताहरूको पनि प्रतिक्रिया हुन्थ्यो – ‘ जो – कोहीले पनि यस किसिमको ऊर्जा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्छन् भने हामीले कहाँ मिटर राख्ने अनि लगानी उठाउने ?’
त्यसपछि, सबै लगानीकर्ताहरूले उक्त प्रोजेक्टबाट हात झिके । उनीहरूले यतिसम्म गरेकि शेयर बजारमा उक्त प्रोजेक्टको शेयर मूल्यलाई भारी मात्रामा न्यून गराए भने टावरको निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य उच्च मात्रामा वृद्धि गराए । यसले गर्दा टेस्लाले टावर निर्माणको खर्च धान्न सकेनन् । जसको फलस्वरूप उक्त टावर निर्माण प्रोजेक्टको दुःखद अन्त्य हुन पुग्यो । टेस्ला र उनको टिमले उक्त प्रोजेक्टलाई सदाका निम्ति परित्याग गरे ।
त्यसलगतै संचारमाध्यममा उनकाविरुद्ध खोइरो खनियो, उनको लाखौ डलर खोलामा गएको भनी धज्जी उडाइयो । तर टेस्लाले हरेस नखाई त्यस किसिमको चौतर्फी आलोचनाको विरोध गर्दै भने – ‘यो एउटा सपना होइन, यो एउटा सामान्य वैज्ञानिक विद्युतीय इन्जिनियरिङको प्रयोग मात्र हो,… अन्धा, कायर मुटु भएका, शंकालु विश्वका लागि मात्र यो महँगो हो ।’
यसरी अधुरो रूपमा निर्मित वार्डेनक्लाइफ टावर प्रथम विश्वयुद्धताका सन् १९१७ मा सुरक्षाको कार देखाउँदै भत्काइयो ।
पहिलो विश्वयुद्ध शुरु हुनेताका अमेरिकी सरकारले जर्मनीको सामुद्रिक जहाजहहरू पत्ता लगाउने उपाय खोजी गरिरहेको थियो । उक्त उपायको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा थोमस एल्वा एडिसनलाई दिइएको थियो । टेस्लाले ऊर्जा तरङ्ग (Energy waves ) को प्रयोगमा आधारित एक प्रस्ताव पेस गरी जसलाई आज हामी राडार प्रविधिको नामले चिन्दछौं । तर एडिसनले टेस्लासँगको दुस्मनीका कारण उक्त प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिए । जसले गर्दा राडारको आविस्कार हुन अरू २५ वर्ष लाग्यो । पछि १९३४ मा फ्रेन्च वैज्ञानिक इमाइल जिरार्डियुले टेस्लाकै सिद्धान्तमा आधारित रही राडार प्रविधिको विकास गरे ।
नोबेल पुरस्कार ?सम्पादन
सन् १९१५ मा भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार एडिसन र टेस्लालाई सँयुक्त रूपमा प्रदान गर्ने घोषणा गरियो तर दुबैले उक्त पुरस्कार अस्वीकार गरे । यसले पनि पुष्टि गर्दछ कि एडिसन र टेस्लाबीचको प्रतिद्वन्दिता कुन हदसम्म रहेछ ।
युद्ध अन्त्य गर्ने हतियारसम्पादन
विश्वभर युद्धको सिलसिला चलिरहेको बेला टेस्लाले १९३७ मा एक नयाँ वैज्ञानिक अवधारणा अघि सारे । उनका अनुसार यस आविस्कारले युद्ध रोक्न सक्नेछ जसलाई उनले पिस बिम ९एभबअभ द्यभबm० नाम दिएका थिए । जसलाई आज ‘चार्ज पार्टिकल बिम विपन (Charged Particle Beam Weapon)’ भनिन्छ । उनले ‘The New Art of Projecting Concentrated Non-Dispersive Energy Through Natural Media’ भन्ने अवधारणा–पत्र सार्वजनिक गरे । उक्त अवधारणा– पत्र अमेरिका बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, सोभियत युनियन लगायतका देशहरूमा पनि पठाए । तर कुनैपनि देशले यसको अनुसन्धानमा चासो देखाएनन् ।
टेस्लाको अवधारणाअनुसार पिस बिम हतियार यस्तो भ्याकुम च्याम्बर हो जुन दुवैतर्फ वायुमण्डलमा खुल्ला हुन्छ, जसमा ग्याँस जेट सिल हुन्छ, जसले पार्टिकलहरू बाहिर पठाउन सक्छ । यसभित्र पार्टिकलहरूलाई लाखौं भोल्टमा चार्ज गरिन्छ र तितर वितर नहुने (Non- Dispersive ) पार्टिकलको रूपमा तोकिएको दिशामा प्रवाहित हुन्छ । यसमा टेस्लाको प्रस्तावअनुसार पार्टिकल गन ( Particle Gun) ले पार्टिकलहरूको भारी मात्रालाई अत्यधिक शक्तिका साथ हावामा पठाउँदछ जसले १० हजार भन्दा बढी सेनालाई २ सय माइल टाढा राख्ने क्षमता राख्दछ, जसले गर्दा दुई देशमा सेनाको बीचमा अदृश्य पर्खाल खडा गरिदिन्छ र युद्धलाई रोक्न मद्दत गर्दछ ।
यी महान् वैज्ञानिक तथा आविस्कारक टेस्लाको मृत्यु ६ जनवरी १९४३ मा हृदयघातका कारण भयो उनको अन्त्येष्टीमा २ हजार भन्दा बढी मानिसहरू सहभागी भएका थिए, जसमध्ये कयौं नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकहरू पनि थिए । तर दुखको कुरा उनको मृत्युको खबर पाउनासाथ अमेरिकी सरकारको गुप्तचर निकाय FBI ले उनका सम्पूर्ण अप्रकाशित महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानका नोटहरू कब्जा ग¥यो । टेस्लाको आविस्कार र पेटेन्टहरूको फाइललाई FBI ले अत्यन्त गोप्य भनी अनुसन्धान ग¥यो । यो अनुसन्धानको नेतृत्व उनै हुभरले गरेका थिए, जसले महान् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्सटाइनको जासुरी गरी १२ हजार पृष्ठको फाइल बनाएका थिए ।
निकोला टेस्ला एक महान वैज्ञानिक तथा आविस्कारक हुन् । उनको आविस्कारको महत्त्वका तुलनामा उनको चर्चा निकै नगण्य मात्रामा मात्रै भयो । यसलाई निकै दुःखद मान्नुपर्छ । उनी आजीबन अविवाहित रहेर निरन्तर वैज्ञानिक अनुसन्धान र आविस्कारमा तल्लीन भए । विभिन्न उतारचढाव र विवादका बाबजुद उनको वैज्ञानिक अनुसन्धन्धानको यात्रा रोकिएन । उनको नाममा ६ सय भन्दा बढी अनुसन्धान र आविस्कारका पेटेन्टहरू छन् । टेस्लाको सम्मानमा म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटीको एकाइको नाम टेस्ला (Tesla ) राखिएको छ । उनकै सम्मानमा अमेरिकी हुलाक सेवा विभागले १९८३ मा उनको चित्र अंकित हुलाक टिकट प्रकाशन गरेको छ । १९७६ मा इन्स्टिच्युट अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्सले अत्यन्तै सम्मानित पुरस्कार “द टेस्ला अवार्ड” स्थापना गरी बार्षिक रूपले प्रदान गर्न थालेको छ । नायगरा पावर स्टेशनमा उनको प्रतिमा स्थापना गरिएको छ । त्यस्तै उनी जन्मिएको स्मिलजानमा पनि उनको प्रतिमा स्थापना गरिएको छ । बिसौं शताब्दीका यी महान् आविस्कारक वैज्ञानिक समुदायमा जति परिचित छन् त्यति आम सर्वसाधारण माझ नभए पनि उनका अमूल्य योगदानहरू र जीबनी हामी सबैका लागि प्रेरणादायी भने अवश्य नै छन् ।
टेस्लाका केही महत्त्वपूर्ण भनाइहरूःसम्पादन
“Inventors don’t have time for married life”
“Invention is the most important product of man’s creative brain. The ultimate purpose is th
e complete mastery of mind over the material world, the harnessing of human nature to human needs.”
“Let the future tell the truth, & evaluate each one according to his works & accomplishments. The present is theirs; the future, for which I have really worked, is mine.”
विकिमिडिया कमन्समा निकोला टेस्ला सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=निकोला_टेस्ला&oldid=966872" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन १८ डिसेम्बर २०२०, १२:५९
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १२:५९, १८ डिसेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।